Wzọ asaa iji kwado nkwa weebụsaịtị weebụsaịtị ndị ahịa | Martech Zone
Anọ m n’oge na-adịbeghị anya na-atụle ụfọdụ ụlọ ọrụ CPG / FMCG weebụsaịtị na ihe a ujo m nwetara! Ndị a bụ òtù dị iche iche na ndị na-azụ ahịa n'aha ha n'ezie ka ha wee bụrụ ndị kachasị bụrụ ndị ahịa, ọ dị mma? Ee ee n'ezie!
Ma ọ bụ naanị ole na ole n’ime ha na-egosi na ha na-ewere ụzọ onye na-eri ihe mgbe ha na-eke weebụsaịtị ha. Ọbụna ndị na-erughị obere nwere obi ụtọ ime ka m chọọ ịlaghachi na weebụsaịtị ha, ọbụlagodi oge ọ bụla!
Site na nyocha m nke ọtụtụ saịtị, ọ dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewu weebụsaịtị ha iji soro ndị ahịa ha kerịta ihe. Agbanyeghị, ọ bụ ozi ahụ ha chọrọ ịkọrọ, ọ bụghị ihe ndị ahịa ha nwere ike inwe.
Nke a mere ka m chee echiche banyere ihe ga-adị mkpa, site na echiche ndị ahịa, ịgụnye na weebụsaịtị. Nke a bụ ndepụta m nke ihe asaa, mana m na-anabata echiche nke gị ma ọ bụ mgbakwunye na ihe ndị dị n'okpuru.
Ihe asaa nke gha adi na weebụsaịtị
Ihe owuwu doro anya nke ahụ bụ kensiri ike. Kwesịrị ịmịnye saịtị maka ndị chọrọ enyemaka ọzọ ma ọ bụ ndị na-enweghị ezi uche na nyocha ha.
Ọ dị mfe ịchọta njikọ njikọ, ma ọ bụ nkọwa ụlọ ọrụ zuru ezu na ibe obibi. Ndị a kwesịrị ịgụnye akara ekwentị, email, adreesị ozi-e na adreesị n'okporo ámá, na akara ngosi mgbasa ozi mmekọrịta. Ikwesiri iburu n'uche na ụbọchị ndị a, ndị ahịa na-agakarị na ebe nrụọrụ weebụ iji chọpụta otu esi akpọtụrụ aha ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ya mere, mee ka ọ dị mfe dị ka o kwere ha.
Ndepụta ụdị gị, ngwaahịa na ọrụ gị. Ebe ọ bụ na ndị ahịa na-eche ụdị aha tupu edemede, gụnye ha onyonyo, yana nkọwa ndị dị mkpa dịka ngwugwu ọdịnaya na ihe ndị ọzọ. Tinye aro ojiji, karie ma oburu na enweghi oke, na ozi banyere ebe ichota ya, karisia ma obu nkesa. Ndị a bụ eziokwu ndị pere mpe ịgụnye, mana n'ezie ị nwere ike ịgụnye nkọwa ndị ọzọ ị maara nwere ike ịmasị ma dị mkpa ka ndị ahịa gị mara.
Otu gbasara ngalaba na-egosi nkọwa ụlọ ọrụ, gụnyere ndị ọrụ njikwa ya - ọ bụghị (naanị) ndị isi na-abụghị ndị isi. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, gbakwunye mpaghara ala ị na-ekpuchi ma nye asụsụ nke asụsụ na homepage. Nkwupụta ozi ụlọ ọrụ ahụ, ụkpụrụ ya, atụmatụ ya na ọdịbendị ya dịkwa mkpa ịkekọrịta ma nyere aka wulite ndị ahịa ahịa ihe ngosi dị mma. Agbanyeghị na ịnwere ngalaba mgbasa ozi maka ndị nta akụkọ na ndị ọchụnta ego, ndị ahịa na-achọ ịmata ihe na-eme na ụdị ọkacha mmasị ha, yabụ tinye ngalaba akụkọ na akụkọ kachasị ọhụrụ.
Bara uru ọdịnaya si ahịa 'n'ọnọdụ. Saịtị a ga-emelitere mgbe niile na nwere cross-nchọgharị ndakọrịta na web-enyi na enyi oyiyi. Ebe ọ bụ na foto na vidiyo bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na weebụ, tinye ha ma ọ bụ kpọọ ndị ahịa gị ka ha tinye nke ha.
Purina aghọwo saịtị a masịrị nke ọma site na ọdịnaya nke onye ọrụ ya, nke ọ na-agbakwunye mgbasa ozi TVC na mbipụta ya kachasị ọhụrụ. Ndị mmadụ na-enwe mmasị ikiri, ịza ajụjụ na ịkekọrịta ihe ọhụụ, yabụ mee ka ọ dịrị ha mfe ịme ma na-arịọ ka ịlaghachi mgbe niile maka akụkọ kachasị ọhụrụ.
A AJQJ section ngalaba na-ajụkarị ajụjụ. Ọ dịkwa mkpa ka emelite mpaghara a oge niile yana ajụjụ ndị na-abanye n'usoro nlekọta na ndị ọrụ ndị ahịa.
Akụrụngwa dịka ọchụchọ, ndebanye aha na ịdenye aha, yana ndepụta RSS maka ndị ahịa gị bara uru ịgbakwunye, iji nyere ha aka ị nweta ọtụtụ ọdịnaya saịtị gị. Na mgbakwunye, koodu nyocha na nyocha ga-enyere gị aka ịgbaso ebe na ihe ndị ahịa gị na-elekarị anya. Nke a ga - enye ozi karịa nke enwetara site na ịjụ ndị ahịa gị ozugbo, akụkụ ndị chọrọ nyocha ma ọ bụ nnọchi.
Ezigbo ihe atụ maka mkpali mmụọ nsọ
Otu n'ime ezigbo ụlọ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ m na-ahụ na nke bụkwa a otutu fun na-emekọ ihe, bụ saịtị nke Reckitt Benckiser. Ọ nwere mmasị n'ezie ma tinye m n'ọrụ ruo oge ụfọdụ na n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, kama ịdepụta ndepụta nke ụdị ya na akara ngosi ha, ọ na-egosi ihe ọ kpọrọ ya Ike a kwụ n'ahịrị gosipụtara na shelf ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ime ụlọ nke ụlọ agamaghị ama (ana m ekweta na nsonaazụ ụda ahụ kpasuru m iwe nwa oge, mana ị nwere ike gbanyụọ ha). Nwere ike ịpị foto nke ngwaahịa ahụ iji nwetakwuo ihe ọmụma na ya, otu na mgbasa ozi ya kachasị ọhụrụ.
Vkpọ ndị na-ege ntị na-agba ndị mmadụ ume ịpị ụdị niile ka ịmatakwu banyere ha. Na ihe ngosi mmekọrịta nke Reckitt Benckiser ụlọ ọrụ ụwa, site na mgbakwunye nke egwuregwu na ihe ịma aka, gbakwunye mkpesa ọzọ, ọ bụghị naanị ndị ahịa, kamakwa ndị gara aga, ndị ọrụ ugbu a na ndị nwere ike.
Lelee saịtị ha jikọtara n'elu wee tụnyere ya na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ gị. Kedu nke ị ga - achọ iji oge nọrọ na ya? Ebe nrụọrụ gị ọ bụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa? Have nwere ihe asaa niile ekwuru n’elu maka websaịtị nke gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụ oge na-eche echiche ahịa mbụ.
5 mmekọrịta mmekọrịta Email Design Ihe na-abawanye Pịa-Site na Ọnụego